Hery - Tsiky dia ampy | Fampianarana
Fa tsy izay mihitsy ny resaka androany fa (tohiny)
2013-03-28 @ 11:01 in Fampianarana
Raha toa tianao ho alaina sary ny zavatra miseho eo amin'ny ecran dia zavatra tsotra no atao. (tohiny)
Pidgin, fitaovana ampiasaiko amin'ny Karajia
2012-01-27 @ 22:48 in Serasera.org, Fampianarana
Araka ny nampanantenaiko ankizy vitsivitsy dia tiako haseho anareo amin'ity lahasoratra an-tsary ity ny fomba fampiasana ny Pidgin mba hahafahana mikarajia haingana sy mahafinaritra ao amin'ny karajia.org.
Voalohany indrindra aloha, ny karajia.org dia takelaka iray izay hahafahanao miresaka (mifanoratra) mivantana amin'ny namana maromaro. Tsy mitsahatra ny misy namana gasy ao 24 ora isanandro. Ka raha sendra mangingina iny ianao na te hiresaka amin'ny namana gasy na dia tsy mifankahafantatra aza dia midira ao amin'ny karajia.org.